भोके भन्छन् जय जय पद, सुरक्षाको छत ? – हिमाल न्युज
भोके भन्छन् जय जय पद, सुरक्षाको छत ?
व्याकरणिक आँखामा ‘पद’ भन्नाले वाक्यमा व्यवहार गर्नलायक वा व्यवहार गरिएका शब्दको कोटि भनेर बुझिन्छ । त्यसै गरी गोडा वा पाउ, श्लोकहरूका लहर । अनि योग्यता काम र महत्त्वका आधारमा निश्चित गरिएको दर्जा, पदवी, उपाधि भन्ने पनि जनाउँछ । यसको अर्को अर्थ ठाउँ पनि हो । धार्मिक आसयमा दान गरिने छाता, जुत्ता लठ्ठी, औँठी, कमण्डलु, पकाउने भाँडा, तामाका भाँडा, जनै, द्रव्य, पकाएको खाने कुरो, काँचो अन्न, आसन र वस्त्र गरी जम्मा तेह्रथरी वस्तुको समूह पनि पद हो । यो दुई अक्षरको बुइ चढेर खुई खुई गर्ने कति चीज रहेछन् त बा ! त्यसैले त शब्द कोटिझैँ लायक बन्न, गोडा बनेर पदरूपी शरीर थाम्न, उपाधि र दर्जामा रङ्गीन, पददानजस्तै पवित्र र मानित हुन कागहरू कोइली बन्न, गिद्दहरू जटायुमा सम्बोधन हुन बहाना गर्छन् । पद तथा पैसा पाइन्छ भने जुनसुकै राजनीतिकवाद, धर्म र संस्कृति अपनाउन तयार हुने मौकबाज चरित्रले चरम दरिद्र मानसिकताको उजागर गरिरहेको छ ।
त्यसैले त हामीलाई भाषाका गुरुहरूले ‘पदवर्ग अर्थात् पार्ट अफ स्पिच’ सानै हुँदामा नै पानी पारेर घोकाएका रहेछन् । जतिजति उमेर छिप्पिँदै र फुल्दै जान्छ मान्छेको जातलाई यो पदको भोक उति उति चर्कंदो रहेछ । पदीय कदमा सुशोभित हुने लत परेका हौँराहरूलाई त पद भनेको सुरक्षाको छद, अरूको अगाडि धाक रबाफ देखाउने आडम्बरको गद्गद र ढुकुटी रित्याउने फतफत रहेछ । टाठाबाठा, सामन्त, बुर्जुवा र ठालुहरूका लागि पद मागी खाने भाँडो तथा कानुन नियम, नैतिकता, सदाचार, विवेक घोच्न सक्ने गजबको काँडो रहेछ । त्यसैले त पदधारीहरू समाज र देशको घाँडो, नकच्चरो राँडो, हदैसम्मको गाँडो भएर हरेक व्यवस्थामा काउसो भएका रहेछन् ।
यतिखेर देश सङ्घीयतामा गएपछि त पद आकाशबाट असिना परेसरह छ । त्यति हुँदा पनि भाग नपुगेर दलमा बसेका हन्तकालेहरू गाँड कोरकोर गरी मिटिङ, बैठक, अन्तक्र्रिया र भेलामा नानाथरी खेला देखाएर निर्वस्त्र बनिरहेका छन् । पदका भोका, यी लुतोका फोका र भदौरे बोकाले भएभरका पदीय पोका पुन्तुरा बोक्न जसलाई जुनै बेला धोका दिन सक्ने कृतघ्नता जाहेर गर्ने अजीव क्षमता देखाउँदै आएका छन् । यस्ता लोभानी पापानीमा लतपतिएकाबाट देशको समृद्धि र विकासको कुरा त किस्सा बन्ने निश्चित छ । घोचघाच, छेडछाड, घुर्की, धम्की, चेतावनी, बहिष्कार, गठजोड र समझदारी कस्तो उखान वा मुहाबरामा फलाक्न पर्छ सब कण्ठाग्र छ बा यी चङ्खनारनका हुललाई ।
आम जनता जनार्दन (देवता)लाई रैती, प्रजा, कमैया, हली, भृत्यवर्ग ठम्याउने पदसङ्ग्रामका हुल्याहा भनौँ वा मुल्याहा, राहु केतु सधैँ पदीय भागबण्डामै रडाको मच्चाएर देश विकास मजैले थच्च्याइरहेका छन् ।
आम जनता जनार्दन (देवता)लाई रैती, प्रजा, कमैया, हली, भृत्यवर्ग ठम्याउने पदसङ्ग्रामका हुल्याहा भनौँ वा मुल्याहा, राहु केतु सधैँ पदीय भागबण्डामै रडाको मच्चाएर देश विकास मजैले थच्च्याइरहेका छन् । पदीय सिनोमा गिद्ध भएर नित्य फाल हाल्ने, आपूm पदमा सुशोभित हुन नपाए दलपरिवारै बाल्ने यिनीहरूको भस्मासुरे बानी ससाना नानीलाई समेत कण्ठाग्र छ । राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत कौडीको भाउमा फाल्ने, तक्षक हुन् भनेर बोध हुँदा हुँदै नि तिनैलाई दूध पिलाउने हाम्रो उपकार धिक्कार छ ! हाम्रो नियति दुत्कार छ ! यी पद लुब्धकहरू पञ्चतन्त्रको सुनको बाला दान गर्न कसिने बूढो बाघ र धोबीको रङ्गमा सिँगारिन पुगेको छट्टू स्यालका मिथकीय कुपात्र हुन् । आज हरेक पदभक्तहरू दललाई आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाको तलतल मेटाउने मञ्च बनाइरहेका छन् । सालासाली, भतिजाभतिजी, प्रेमिका, सबैपटिका सात पुस्तालाई कुवेर बनाइदिन धर्म, कर्म, मर्म शर्म, चर्म, सबै फेर्न र जस्तोसुकै फेटा कस्न तयार छन् पदमा आसक्त माखाहरू । त्यसैले त यी सिङ्गापुर बनाउने हौवा पिटेर झिँगापुरमा सेलाउँदै छन् देशलाई । रेल कुदाउने सपना बाँडेर झेलको सेल पकाइरहेका छन् । घरघरमा ग्याँस बाँड्ने कुरा टिकिट्याँस हुँदा पनि जनतालाई भ्mयाँस ठानेर पदीय अहङ्कारमा माघे सङ्क्रान्तिको साँढेझैँ पदीय जुरो हल्लाएर हुक्काँ र पूmँ–पूmँ चारै पद वा पाउ टेकेर कुर्लिरहेका छन् बा ? जमिनको धुलो उँडाएर ।
पदको आसनमा आसीन हुन पाएछि सबैले हजुरको सम्बोधनमा गजुर लगाइदिहाल्छन् । बक्स्योस्को छाना हालेर ज्युनारको चास्नीमा डुब्न पाउने सोखमा यिनले जार, लुई, किमइलसुङ र जङ्गबहादुरलाई पनि भङ्ग पारिसके बा ! पद नै प्रतिष्ठा, पैसा, परी, प्रेमी, परिवार, प्रशस्ती, पराक्रम, प्रखरता, प्रबलता, प्रभाव, प्रकाश, प्रशन्नता, उत्पादन गर्ने साधन रहेछ भन्ने कोरा चिन्तनको नसा पिएर देश र जनतामा दशा थपिरहेछन् । यही दिव्य ज्ञान पाएकैले सुरक्षाको छद, बलियो कद, र सधैँ गद्गद बनिरहन पद प्राप्तिको लडाइँ जारी छ । त्यसैले त भोकलाग्ने भोकेहरू मन वचन र कर्मैले भन्छन्, जय जय पद, सुरक्षाको छत, जय पैसा, जय सत्ता !!
स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका गोप्य कुरा : बेड...
दृष्टिविहीन सृष्टिको रंगीन जीवन !
मेसीले भने ‘नेपाल आउँछु’ !
पढ्नै पर्ने मन छुने कथा !! युद्धको अधुरो...
छोरी राष्ट्रपति आमा वृद्धाश्रममा, अलिक तालमेल मिलेन नि...
कुरा काटेरै दिन काट्न नपरोस्, लोग्नेको कमाइ थाप्न...
दिल्लीको दिल फेरियो, अब देशको मुहार फेरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू...
टीकापुर घटनामा दिवंगत प्रहरी निरीक्षकका छोराछोरीले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई...
रहरै रहरको सहर काठमाडौँ आउदाँ को मेरो भोगाई...
हलिउड फिल्ममा नीता ढुंगाना
“भर्खरै चितवनमा एक्कासि भयो हानाहान” हिजो भन्दा आज झन किन यस्तो ?
रविले समर्थकलाई हात हल्लाउदै पुगे अदालत
२ सय जनासँग डेटिङ, कोहीपनि चित्त नबुझेपछि कुकुरसँग बिहे
यस्तो देश जहाँ एक वर्षमा २२ जना पुरुष सुत्केरी भए